GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Ihe ọma ndị ga-abịara ndị rubere isi (1-14)
Ihe ọjọọ ndị ga-eme ndị nupụrụ isi (15-68)
28 “Ọ bụrụ na unu egee ntị n’olu Jehova bụ́ Chineke unu ma lezie anya na-edebe iwu ya niile m na-enye unu taa, Jehova bụ́ Chineke unu ga-eme ka unu ka mba ndị ọzọ niile dị n’ụwa.+ 2 A ga-agọzi unu nke ukwuu, ihe ọma niile a ga-abịakwara unu+ maka na unu na-ege ntị n’olu Jehova bụ́ Chineke unu: 3 “A ga-agọzi unu n’obodo, gọziekwa unu n’ubi.+ 4 “A ga-agọzi ụmụ* unu+ na ihe ala unu na-emepụta nakwa ụmụ anụ ụlọ unu, ya bụ, ehi unu na atụrụ unu.+ 5 “A ga-agọzi nkata unu+ na efere unu ji agwọ ntụ ọka.*+ 6 “A ga-agọzi unu mgbe unu na-abata abata, gọziekwa unu mgbe unu na-apụ apụ. 7 “Jehova ga-eme ka unu merie ndị iro unu na-alụso unu agha.+ Ha ga-esi n’otu ụzọ bịa ịlụso unu agha, ma ha ga-esi n’ụzọ asaa gbapụ n’ihu unu.+ 8 Jehova ga-agọzi ebe unu na-akwasa ihe,+ gọziekwa ihe ọ bụla unu na-eme. Ọ ga-agọzi unu n’ala ahụ Jehova bụ́ Chineke unu na-enye unu. 9 Jehova ga-eme ka unu bụrụ ndị ya dị nsọ,+ otú ọ ṅụụrụ unu n’iyi,+ maka na unu na-edebe ihe Jehova bụ́ Chineke unu nyere n’iwu ma na-eme uche ya. 10 Ndị niile bi n’ụwa ga-ahụ na unu na-aza aha Jehova,+ ha ga-atụkwa unu egwu.+ 11 “Jehova ga-eme ka unu nwee ọtụtụ ụmụ na ọtụtụ anụ ụlọ, meekwa ka ala ahụ Jehova ṅụụrụ nna nna unu hà iyi na ọ ga-enye unu+ na-emepụta ihe n’ụba.+ 12 Jehova ga-emepere unu eluigwe ya otú mmadụ si emepe ebe ọ kwasara ezigbo ihe ma mee ka mmiri zoo n’ala unu n’oge ya,+ gọziekwa ihe niile unu na-eme. Unu ga-agbazinye ọtụtụ mba ihe, ma e nweghị ihe ga-eme ka unu gbaziri ihe.+ 13 Jehova ga-eme ka unu bụrụ ndị isi, ọ bụghị ndị ọdụ. Unu ga-anọ n’elu,+ ọ bụghị n’ala, ma ọ bụrụ na unu ana-erube isi n’iwu Jehova bụ́ Chineke unu, bụ́ ndị m na-enye unu taa ka unu na-edebe ma na-eme. 14 Unu anwala anwa hapụ ihe niile m na-enye unu n’iwu taa gaa mewe ihe ọzọ,+ ka unu wee soro chi ọzọ dị iche iche ma fewe ha ofufe.+ 15 “Ma ọ bụrụ na unu egeghị ntị n’olu Jehova bụ́ Chineke unu ma lezie anya na-edebe iwu ya niile, na-emekwa ihe ndị o kpebiri bụ́ ndị m na-agwa unu taa, a ga-abụrịrị unu ọnụ, ihe ọjọọ a niile ga-emekwa unu:+ 16 “A ga-abụ unu ọnụ n’obodo, bụọkwa unu ọnụ n’ubi.+ 17 “A ga-abụ nkata unu+ na efere unu ji agwọ ntụ ọka ọnụ.+ 18 “A ga-abụ ụmụ* unu+ na ihe ala unu na-emepụta ọnụ, bụọkwa ụmụ ehi unu na atụrụ unu ọnụ.+ 19 “A ga-abụ unu ọnụ mgbe unu na-abata abata, bụọkwa unu ọnụ mgbe unu na-apụ apụ. 20 “Jehova ga-abụ unu ọnụ, mee ka unu nọrọ n’ọgba aghara, taakwa unu ahụhụ n’ihe ọ bụla unu na-eme ruo mgbe e bibiri unu, unu ewee laa n’iyi n’egbughị oge, n’ihi omume ọjọọ unu nakwa n’ihi na unu hapụrụ ya.*+ 21 Jehova ga-eme ka unu rịawa ọrịa na-anaghị ala ala ruo mgbe o bibichara unu n’ala ahụ unu na-aga iweghara.+ 22 Jehova ga-eme ka unu rịawa ụkwara nta, oké ahụ́ ọkụ,+ ahụ́ ọzịza, na oké okpomọkụ. Ọ ga-eme ka a lụso unu agha,+ meekwa ka ihe unu kụrụ kpọnwụọ nakwa ka ha maa ebù.+ Ihe ndị a ga-emegide unu ruo mgbe unu ga-anwụcha. 23 Mbara igwe unu ga-adị ka ọla kọpa,* ala unu ga-adịkwa ka ígwè.*+ 24 Jehova ga-eme ka ntụ na uzuzu si n’eluigwe na-ezo n’ala unu ka mmiri ruo mgbe unu lara n’iyi. 25 Jehova ga-eme ka ndị iro unu merie unu.+ Unu ga-esi n’otu ụzọ gaa ịlụso ha agha, ma unu ga-esi n’ụzọ asaa gbapụ n’ihu ha. Alaeze niile dị n’ụwa ga-atụ ụjọ mgbe ha ga-ahụ ihe ọjọọ ndị na-eme unu.+ 26 Ozu unu ga-abụrụ nnụnụ niile na-efe n’eluigwe na anụmanụ ndị na-agagharị n’ala ihe oriri, e nweghịkwa onye ga-achụpụ ha.+ 27 “Jehova ga-eme ka etuto toro ndị Ijipt too unu, meekwa ka ọkpụ ikè, ụ́gwọ̀, na ọkọ, bụ́ ndị a na-agaghị agwọ agwọ, mee unu. 28 Jehova ga-eme ka ara gbaa unu, mee ka unu kpuo ìsì,+ meekwa ka uche ghara ịkpakọ unu ọnụ. 29 Unu ga na-asọgharị ìsì n’ehihie otú onye ìsì si asọgharị ìsì n’ọchịchịrị,+ e nweghịkwa ihe unu na-eme ga-agara unu nke ọma. A ga na-erigbu unu mgbe niile, na-ezu unu ohi, e nweghịkwa onye ga-azọpụta unu.+ 30 Unu ga-ekwe nwaanyị nkwa na unu ga-alụ ya, ma nwoke ọzọ ga-edina ya n’ike. Unu ga-arụ ụlọ, ma unu agaghị ebi na ya.+ Unu ga-akọ ubi vaịn, ma unu agaghị amalite iri mkpụrụ ya.+ 31 A ga-egbu ehi unu n’ihu unu, ma unu agaghị eri anụ ya ọ bụla. A ga-ezuru jakị unu n’ihu unu, ma a gaghị akpọghachiri ya unu. A ga-akpụnye ndị iro unu atụrụ unu, ma e nweghị onye ga-azọpụta unu. 32 Unu ga na-ele anya a kpọrọ ụmụ unu ndị nwoke na ụmụ unu ndị nwaanyị kpọnye ndị ọzọ.+ Agụụ ịhụ ha ga na-agụ unu mgbe niile, ma e nweghị ihe unu ga-emeli. 33 Ndị unu na-amaghị ga-eri ihe ala unu mepụtara na ihe niile unu rụtara.+ A ga na-erigbu unu mgbe niile, na-echikwa unu ọnụ n’ala. 34 Ihe unu ga-eji anya unu ahụ ga-agbaka unu isi. 35 “Jehova ga-eme ka etuto na-afụ ụfụ nke a na-anaghị agwọta agwọta too unu n’ikpere nakwa n’ụkwụ, malite n’ọbụ ụkwụ unu ruo n’opu isi unu. 36 Jehova ga-achụga unu na onye unu ga-eme eze ná mba unu na nna nna unu hà na-amaghị.+ Unu ga-efe chi ọzọ dị iche iche n’ebe ahụ, chi ndị e ji osisi na nkume mee.+ 37 Ihe ndị ga-eme unu ga-emenye ndị bi n’ebe niile Jehova ga-achụga unu ụjọ. Ha ga-eji unu mere ihe ọchị,* ha agaghịkwa eji unu kpọrọ ihe.+ 38 “Unu ga-agha ọtụtụ mkpụrụ n’ubi, ma ihe unu ga-eweta ga-adị ole na ole,+ n’ihi na igurube ga-erichapụ ha. 39 Unu ga-akọ ubi vaịn, lekọtakwa ya, ma unu agaghị aṅụ mmanya ọ bụla, unu agaghịkwa aghọta ihe ọ bụla,+ n’ihi na ọtị ga-erichapụ ya. 40 Unu ga-enwe osisi oliv n’ala unu niile, ma unu agaghị ete mmanụ ọ bụla n’ahụ́, n’ihi na mkpụrụ oliv unu ga-adapụcha. 41 Unu ga-amụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị, ma ha agaghị abụ nke unu, n’ihi na a ga-adọrọ ha n’agha.+ 42 Ụmụ ahụhụ dị iche iche ga-eju n’osisi unu niile nakwa n’ihe ala unu mepụtara. 43 Onye mbịarambịa nke binyeere unu ga na-adị ike karịa unu, ma ike ga na-agwụkwu unu. 44 Ọ ga-agbazinye unu ihe, ma unu agaghị agbazinye ya ihe.+ Ọ ga-abụ onyeisi, ma unu ga-abụ ndị ọdụ.+ 45 “A ga-abụrịrị unu ọnụ,+ ihe ọjọọ niile a ga-emekwa unu ruo mgbe unu lara n’iyi,+ n’ihi na unu egeghị ntị n’olu Jehova bụ́ Chineke unu, unu edebeghị iwu ya ma soro ntụziaka ndị o nyere unu.+ 46 Unu na ụmụ unu ga na-abụ ndị a bụrụ ọnụ. Ọnụ ahụ a bụrụ unu ga-abụkwa ihe àmà ga-adịgide adịgide na ihe ịdọ aka ná ntị,+ 47 n’ihi na unu ejighị ọṅụ na obi ụtọ fee Jehova bụ́ Chineke unu* mgbe unu nwejuru ihe niile enweju.+ 48 Jehova ga-eme ka ndị iro unu bịa lụso unu agha, unu ga-ejekwara ha ozi.+ N’oge ahụ, agụụ ga na-agụ unu,+ mmiri ga na-agụkwa unu, unu agaghị eyi ezigbo ákwà, ihe niile ga-akọkwa unu. Ọ ga-anyawa unu yok ígwè n’olu ruo mgbe ọ lara unu n’iyi. 49 “Jehova ga-eme ka mba dị n’ebe dị anya si n’ebe ụwa sọtụrụ bịa lụso unu agha.+ Ọ ga-alụso unu agha n’ike otú ugo si efekwasị n’ihe ọ chọrọ iburu.+ Ọ ga-abụ mba unu na-agaghị aghọta asụsụ ha,+ 50 mba nke na-emenye mmadụ ụjọ, nke na-agaghị akwanyere agadi ùgwù ma ọ bụ meere onye na-eto eto ebere.+ 51 Ha ga-eri ụmụ anụ ụlọ unu na ihe ala unu mepụtara ruo mgbe e kpochapụrụ unu. Ha agaghị ahapụrụ unu ọka* ọ bụla, mmanya ọhụrụ ma ọ bụ mmanụ ọ bụla, ụmụ ehi ma ọ bụ ụmụ atụrụ ọ bụla ruo mgbe ha bibiri unu.+ 52 Ha ga-anọchibido unu, ghara ikwe ka unu si n’obodo niile dị n’ala unu pụta, ruo mgbe mgbidi ndị dị elu unu rụsiri ike, bụ́ ndị unu tụkwasịrị obi, ga-ada. N’eziokwu, ha ga-anọchibido unu n’obodo niile dị n’ala unu nke Jehova bụ́ Chineke unu nyere unu.+ 53 N’ihi otú ihe ga-esi siere unu ike mgbe ndị iro unu ga-anọchibido unu nakwa otú ha ga-esi na-echi unu ọnụ n’ala, unu ga-eri ụmụ* unu, ya bụ, anụ ụmụ unu ndị nwoke na ụmụ unu ndị nwaanyị,+ bụ́ ụmụ Jehova bụ́ Chineke unu nyere unu. 54 “Nwoke nke na-eme nwayọọ nwayọọ, nke ihe kacha emetụ n’ahụ́ n’ime unu, agaghịdị emetere nwanne ya nwoke ma ọ bụ nwunye ya ọ hụrụ n’anya ma ọ bụ ụmụ ya ndị fọrọ afọ ebere. 55 Ọ gaghịkwa enyetụ ha anụ nwa ya nke ọ bụla ọ ga-eri, n’ihi na e nweghị ihe ọ bụla ọzọ o nwere n’ihi otú ihe ga-esi siere unu ike mgbe ndị iro unu ga-anọchibido unu nakwa otú ha ga-esi na-echi unu ọnụ n’ala.+ 56 Nwaanyị nke na-eme nwayọọ nwayọọ, nke ihe na-emetụkwa n’ahụ́, nke na-agaghịdị eche echiche ịzọ ụkwụ ya n’ala maka na ọ na-eme nwayọọ nwayọọ+ agaghị emetere di ya ọ hụrụ n’anya ma ọ bụ nwa ya nwoke ma ọ bụ nwa ya nwaanyị ebere. 57 Ọ gaghịdị enyetụ ha ihe ọ bụla na-esi n’ahụ́ ya apụta mgbe ọ mụchara nwa nakwa anụ ụmụ ndị ọ ga-amụ. Ọ ga-eri ha na nzuzo n’ihi otú ihe ga-esi siere unu ike mgbe ndị iro unu ga-anọchibido unu nakwa n’ihi otú ha ga-esi na-echi unu ọnụ n’ala. 58 “Ọ bụrụ na unu elezighị anya mee ihe niile e kwuru n’Iwu a, bụ́ ndị e dere n’akwụkwọ a,+ gharakwa ịtụ egwu aha a dị ebube ma dị egwu,+ ya bụ, aha Jehova+ Chineke unu, 59 Jehova ga-ata unu na ụmụ unu ezigbo ahụhụ, nnukwu ahụhụ na-agaghị ebi ebi,+ meekwa ka unu rịawa ajọ ọrịa ndị na-anaghị ala ala. 60 Ọ ga-eme ka unu rịa ọrịa niile ndị Ijipt rịara, bụ́ ọrịa ndị unu na-atụ egwu, ndị na-agaghịkwa ala ala. 61 Jehova ga-emedị ka unu rịa ọrịa ọ bụla a na-edeghị n’akwụkwọ Iwu a, taakwa unu ahụhụ ọ bụla a na-edeghị n’akwụkwọ Iwu a ruo mgbe unu lara n’iyi. 62 N’agbanyeghị na unu adịla ọtụtụ ka kpakpando ndị dị n’eluigwe,+ unu ga-afọ mmadụ ole na ole+ maka na unu egeghị ntị n’olu Jehova bụ́ Chineke unu. 63 “Otú ahụ obi dị Jehova mma ime ka ihe gaziere unu nakwa ka unu mụbaa ka obi ga-adịkwa Jehova mma ibibi unu na ịla unu n’iyi. A ga-ekpochapụkwa unu n’ala ahụ unu na-aga iweghara. 64 “Jehova ga-achụsasị unu ná mba niile, malite n’otu nsọtụ ụwa ruo na nsọtụ ya nke ọzọ.+ N’ebe ahụ, unu ga-efe chi dị iche iche e ji osisi na nkume mee, chi ndị unu na nna nna unu hà na-amaghị.+ 65 Obi agaghị eru unu ala ná mba ndị ahụ,+ unu agaghịkwa ahụ ebe ụkwụ unu ga-ezu ike. Kama, Jehova ga-eme ka obi koro unu n’elu,+ ka ike gwụ anya unu, nakwa ka unu daa mbà n’obi.+ 66 Ihe ndị ga-ata isi unu ga-agba unu gburugburu, ụjọ ga na-atụkwa unu abalị na ehihie. Unu agaghị eji ndụ unu n’aka. 67 N’ụtụtụ, unu ga-asị, ‘A sị nnọọ na ọ bụ mgbede!’ Ná mgbede, unu ga-asịkwa, ‘A sị nnọọ na ọ bụ ụtụtụ!’ n’ihi na unu ga-achị obi unu n’aka nakwa n’ihi ihe anya unu ga-ahụ. 68 Jehova ga-eji ụgbọ mmiri bughachi unu n’Ijipt, bụ́ ebe m gwara unu banyere ya, sị, ‘Unu agaghị ahụ ya ọzọ.’ N’ebe ahụ, unu ga-achọ ka unu resị ndị iro unu onwe unu ka unu bụrụ ohu ha ndị nwoke na ohu ha ndị nwaanyị, ma e nweghị onye ga-azụrụ unu.”
^ Na Hibru, “mkpụrụ nke afọ.”
^ Ya bụ, na ọka ga na-adị na nkata ha, ntụ ọka ga na-adịkwa n’efere ha ji agwọ ntụ ọka.
^ Na Hibru, “m.”
^ Ya bụ, mmiri agaghị ezo.
^ Ya bụ, ala ga-akpọ nkụ.